Shirka Golaha Wasiirada Dowladda Puntland oo looga hadlay Arrimaha Abaaraha | SAHAN ONLINE
Shirka Golaha Wasiirada Dowladda Puntland oo looga hadlay Arrimaha Abaaraha
GAROOWE – Shirkii golaha Wasiirada Puntland oo uu shir guddoominayay Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta looga hadlay arrimo ay kamid yihiin amniga iyo xaaladda abaaraha Puntland.
Golaha Wasiirada Puntland ayaa caddeeyay in amniga Puntland uu yahay mid wanaagsan guud ahaan marka laga reebo dhibaateynta joogtada ah ay ku hayaan kooxaha argagaxisada ah ummada Soomaaliyeed guud ahaan.
Golaha Xukuumadda Puntland ayaa maanta si qoto dheer uga dooday xaaladda abaaraha ee kusoo wajahan Puntland,wuxuuna golohu caddeeyey in ay kusii siqeyso waqtiyadii adkaa ee abaaraha.
Abaarta ayaa ah mid saameyn ku yeelatay dad gaaraya 1.6 milyan oo reer Puntland iyo 234 deegaan oo ka kala tirsan 9 gobol ee Puntland,waxaana hadda gaaray xaalad adag 103,000 qoys.
Gollaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah loogu istaago tallaaadaas haddii uusan eebe raxmadiisa shubin.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa golaha u sheegay in loo diyaar garoobo xaaladda abaarta isla markaana la jiheeto dhammaan qorshayaasha wax looga qabanayo abaarta.
Madaxweynaha ayaa u sheegay shacabka Puntland dal iyo dibadba in loo diyaar garoobo xaaladda abaarta haddii uu yaraado ama la waayo roobka gugga ee la filayo haddii Allaah idmo,wuxuuna isugu yeeray Wasaaradaha u qaabilsan dowladda arrimaha iyo hay’adaha ka shaqeeya xaaladda bini’aadanimada Soomaaliya.